Sponsored Archives - MYANMORE+
Sponsored myanmoreplus - January 19, 2021 0
FutureLearnမှ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဟောင်းသည် Nord Anglia ၏ EdTech ဌာနခွဲကို ဦး ဆောင်ပါသည်။ လန်ဒန်၊ ၂၀၂၁ ဇန်နဝါရီ ၁၉ ရက် - ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးနိုင်ငံတကာအဆင့်မီအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သော Nord Anglia ပညာရေးသည် Simon Nelson အား Group Digital Director အဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့သည်ဟုကြေငြာခဲ့ပါသည်။ သူ၏အခန်းကဏ္ဍအသစ်တွင် Simon...
Sponsored myanmoreplus - June 19, 2020 0
အကယ်၍ သင်သည်စားသောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်သို့မဟုတ် bartender တစ်ယောက်ဆိုလျှင် ဖန်ထည်ပစ္စည်းများအားနေ့စဉ်အသုံးပြုနေရလိမ့်မည်ဟုထင်ပါသည်။ Chef&Sommelier ရဲ့ Krysta™ ဖန်ထည်တွေဟာသင့်ဆိုင်ကိုအမြဲတောက်ပနေစေမှာပါ။ ဖန်ခွက်တွေဟာဝိုင် (သို့) highball drink တွေရဲ့အရောင်ကိုပေါ်လွင်စေပါတယ်။ Krysta ဖန်ထည်များ၏တောက်ပကြည်လင်မှုကြောင့် အဖျော်ယမကာတွေရဲ့လှပတဲ့အရောင်ကိုအရှိအတိုင်းတွေ့မြင်ခံစားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သင့် customer များ toast လုပ်သောအခါအရည်အသွေးမြင့် Krysta ဖန်ထည်ဟာသာမန်ဖန်ခွက်များထက်ကြည်လင်သောအသံကိုထုတ်ပေးပါလိမ့်မည်။ Seamless Stem နည်းပညာကြောင့်ခွက်ကိုပို၍မြဲမြံစွာကိုင်ထားနိုင်မှာဖြစ်ပြီး မတော်တဆဖန်ခွက်လွတ်ကျလျှင်တောင်မှ Krysta ဖန်ထည်သည်...
Sponsored myanmoreplus - June 8, 2020 0